Madaxwaynaha Jsl Oo Khudbad Sanadeedkii Dastuuriga Ahayd Ka Horjeediyay Baarlamaanka Somaliland | Radio Hormuud
Qof looga shakisan yahay in uu Al-shabaab yahay oo lagu qabtay caasimadda Turkiga
Shir Haweenka Somaliland lagaga Taageerayo Ka Qayb-galka Arrimaha Siyaasadda Oo Lagu Qabtey Hargeysa
Maxkamad xukun naadir ah u riday haweeney la furay
Sawirro: Wafdi ka socda beesha caalamka oo tegay Kismaayo
Madaxwaynaha Jsl Oo Khudbad Sanadeedkii Dastuuriga Ahayd Ka Horjeediyay Baarlamaanka Somaliland
Hargeysa(RH)Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ahayd ee Sanadkan 2020 ka Horjeediyey Labada Gole Baarlamaan Ee Somaliland
Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ah Ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Ayaa u dhignayd Sidan:-
2. Adeegyada Bulshada
4. iyo Arrimaha Dibedda
§ Hal-beega Cabirka Dhaqaalaha (GDP) ee JSL waxa uu kordhay 2% labadii sanno ee ugu dambeeyey. Halka koboca dhaqaalaha Qaaradda Afrika ay Qaramada Midoobay ku qiyaastay sannadkii 2019-ka 3.4%. Taas oo muujinaysa in Somaliland koboceeda dhaqaale uu kordhayo, iyada oo ay jiraan caqabado dhaqaale oo u gaar ah Jamhuuriyadda Somaliland.
§ Waxa lagu guulaystay in Sicir Bararku ka soo dago 19%, lana gaadhsiiyo 4% sannadkii 2019-ka.
§ Waxa sidoo kale lagu guulaystay in qiimaha Shillinka Somaliland kor loo qaado qiimihiisa 21% sannadkii 2019-ka.
§ Dakhliga dalku waxa uu ka kor-maray odoroskii miisaaniyadda sannadka 2019-ka 4.5%. Taas oo muujinaysa dadaalka iyo awooda hay’adaha dakhli ururinta Qaranka.
§ Waxa Miisaaniyadda Qaranka ee sannadkii 2019-ka laga maal-geliyey mashaariic qiimahoodu gaadhayo 152,040,135,320 SL. Shilling, oo dhammaanteed Qaranku bixiyey.
§ Waxa Miisaaniyadda Qaranka ee Sannadkan 2020-ka laga maal-gelin doonaa mashaariic qiimahoodu gaadhayo 158, 827,455, 889 SL. Shillings.
§ Waxa la hirgaliyey Nidaamka Maamulka Xisaabaadka Dawladda ee loo yaqaan (PFM), oo wax weyn ka tari doona hagaajinta nidaamka maaliyada dalka, cashuur qaadista, kordhinta dakhliga, beekhaaminta kharashaadka Dawladda, awoodda adeeg-bixinta, hirgelinta mashaariicda horumarineed iyo koboca dhaqaalaha dalka.
2. Wax-soo-saarka Beeraha, Xoolaha iyo Kalluumaysiga
§ Waxa 42,000 oo saacadood iyo shinni bilaash ah la gaadhsiiyey beeralayda Gobollada Dalka oo gaadhaya 14,000 qoys.
§ Waxa 7 Cagaf la guddoonsiiyey Iskaashatooyinka beeraha magaalooyinka Beerato iyo Beer ee Gobollada Daad-madheedh iyo Togdheer.
§ Waxa 4,750 Mitir oo tuunbooyin ah iyo 85 Mishiinnada Biyaha ah la guddoonsiiyey 170 Qoys oo kala jooga Gobollada Dalka.
§ Waxa cuduro kala duwan laga tallaalay 3 million oo neef oo xoolo ah, waxaana ka qayb galay 38 kooxood oo ah hawl-wadeenada caafimaadka Xoolaha ah.
§ Waxa la daweeyey 1,500,000 oo neef oo iskugu jira Adhi, Geel, Lo’ iyo Fardo.
§ Waxa calafka Xoolaha lagu naaxiyo loo qaybiyey 19,550 qoys oo ah xoola dhaqato kala jooga Gobollada Dalka.
§ Waxa Xukuumaddu soo iibisay Afar doonyood oo loogu tala-galay Tababarka Kalluumaysatada Dalka.
3. Kaabayaasha Dhaqaalaha
§ Waxa si xawli ah u socota ballaadhinta iyo casriyeynta Dekedda Berbera, waxaana dhammaaday 43% Wajigii Koowaad ee dhismaha ballaadhinta Dekedda Berbera oo ka kooban 400 oo Mitir.
§ Waxa la dhisay 7% ka mid ah Marinka Dhaqaale ee Berbera Corridor ee isku xidha Somaliland iyo Itoobiya.
§ Waxa dhawaan la bilaabi doonaa dhismaha 22.5 KM oo waddo ah oo qayb ka ah Marinka Dhaqaalaha ee Berbera Corridor, oo ka leexan doona Magaalada Hargeysa, si culayska iyo samxadda gaadiidka xamuulka ah looga yareeyo Caasimadda Dalka.
§ Waxa Dawladaha Somaliland iyo Imaaraadka Carabtu ku heshiiyeen in Madaarka Berbera laga dhigo Madaar Caalami ah oo ay adeegsadaan Shicibka iyo Badeecadaha iskaga gooshaya Gobolka, Qaaradda Afrika iyo Caalamkaba.
§ Waddada Burco – Ceerigaabo waxa la dhisay 107 Km intii Xukuumaddani xilka haysay, waxaana hore u dhisnaa 94 Km, oo isku noqonaya 201 KM.
§ Waxa la dhisay 49 Km oo ka mid ah waddada isku xidha Hargeysa-Kalabaydh.
§ Waxa dhammaad ku dhaw Dhismaha Biriishka isku xidha Magaalada Boorama iyo Jaamacadda Camuud.
§ Waxa dayactir ballaadhan lagu sameeyey jidka isku xidha Laascaanood iyo Tuula-Samakaab iyo Adhi-caddeeye.
§ Waxa dayactir ballaadhan lagu sameeyey Biriishka labaad ee magaalada Burco oo roobabku khasaare gaadhsiiyeen.
§ Waxa la wadaa mashruuc casri ah oo lagu xakamaynayo xawaaraha gaadiidka. Shilalka gaadiidka oo soo badanaya darteed, sannadkii 2019-ka waxa innagaga dhintay 274 qof.
4. Adeega Bulshada
§ Waxa mudnaan gaar ah la siiyey adeegyada caafimaad ee qaybaha bulshada ee nugul, sida xarumaha daryeelka hooyada uurka leh iyo dhallaanka.
§ Waxa si rasmi ah xarumaha caafimaadka dawliga ah looga shaqaalaysiiyey 512 xirfadlayaal caafimaad ah oo kala jooga Gobollada Dalka.
§ Waxa tababaro aqoon korodhsi ah la siiyey 3,100 Xirfadlayaal Caafimaad ah, si kor loogu qaado tayada adeegyada caafimaad ee ay bulshada JSL helaan.
§ Waxa cudurada faafa laga tallaalay caruur tiradoodu gaadhayso 733,654 caruur ah oo da’doodu ka hoosayso shan jir, tiradaas oo 10% ka badan caruurta la tallaalay sannadkii 2018-ka.
§ Waxa cisbitaallada, xannaanooyinka iyo rugaha caafimaadka lagu daweeyey 526,273 qof oo iskugu jira Bukaan-socod iyo Bukaan-jiif.
§ Waxa markii ugu horaysay 10 caruur ah loogu sameeyo qaliin dhinaca wadnaha ah magaalada Hargeysa. Adeegaas oo dhammaantii Xukuumaddu kafaalo qaaday kharashkiisa.
§ Waxa la hirgaliyey 22 xarumo caafimaad oo cusub oo bixin doona adeegyo caafimaad.
§ Waxa la hirgaliyey Kulliyadda Tababarka Macallimiinta Qaranka, waxaana lagu bilaabay 400 oo macallin oo ka kala yimid dugsiyada hoose/dhexe ee dalka, si loo tayeeyo waxbarashada aasaasiga ah.
§ Waxa deeq-waxbarasho dibadeed loo diray arday gaadhaysa 450 arday oo ka kala yimi dhammaan Gobollada Dalka, iyaga oo lagu xulay sida ay u kala sareeyaan dhibcaha imtixaamaadka shahaadiga ah.
§ Waxa bishii February 2019-ka si rasmi ah u bilaabmay in arday kasta oo dhigta Dugsiyada Hoose/Dhexe ee dawliga ahi helo buugaagta manhajka waxbarashada Dalka. Waxa sannadkan la gaadhsiiyey 100,200 oo buug arday gaadhaysa 153,077 arday oo kala jooga dhammaan gobollada iyo degmooyinka Dalka.
§ Waxa la shaqaalaysiiyey 400 oo macallin oo cusub, si loo kordhiyo fiditaanka adeegga waxbarashada Dalka.
§ Waxa la dhisay 201 fasal oo cusub oo lagu kordhiyey 102 dugsi oo ku kala yaala Gobollada Awdal, Togdheer, Sanaag, Sool iyo Saaxil.
§ Waxa la qoday 32 Ceel oo ah kuwa dhaadheer.
§ Waxa la dayactiray 66 Ceel oo ah Ceelal dhaadheer.
§ Waxa sahamintooda la dhammaystiray 33 Ceel oo ah ceelasha dhaadheer.
§ Waxa la qoday 8 Dhaam oo cusub, waxaana la dayactiray 12 Dhaam.
§ Waxa la qoday 153 Barkadood oo cusub, waxaana la dayactiray 203 Barkadood oo hore u jiray.
§ Waxa biyo ballaadhin laga hirgaliyey magaalooyinka Hargeysa, Burco, Berbera, Ceerigaabo iyo Borama.
§ Waxa meel fiican oo lagu diirsado maraya biyo ballaadhinta magaalada Caasimadda ah ee Hargeysa, waxaanu u qaybsamaa mashruucaasi laba qaybood oo kala ah, Biyo soo-saarka iyo soo gaadhsiinta Biyaha ee magaalada Hargeysa, waxaana dhammaaday mashruucaa 80%, qaybta labaad ee mashruucu waa biyo qaybinta magaalada gudaheeda, waxaana dhammaaday 30%.
5. Shaqo Abuurka Dhallinyarada
§ Waxa la daah-furay Barnaamij ballaadhan oo shaqo abuur loogu samaynayo dhallinyarada JSL oo loogu wan-qalay ‘Barnaamijka Shaqo Qaran’. Barnaamijka Shaqo Qaran waxa ka qalin-jabiyey, oo ka faa’iidaystay dhallinyaro tiradoodu gaadhayso 1,349 dhalliyaro ah oo iskugu jirta hablo iyo wiilal. Dhammaan dhallinyaradaasi waxa ay soo qaateen 3 bilood oo tababar iyo carbis nololeed ah, waxaanay hadda ka hawl-galaan Hay’adaha Dawladda ee kala duwan, qaarkoodna waxa ay ku biireen Ciidanka Qaranka JSL.
§ Barnaamijka Shaqo Qaran waxa uu sannadkan qaadan doonaa 1,000 Dhallinyaro ah oo cusub.
§ Xukuumaddu waxa ay ku dhawaaqday hirgalinta Sanduuqa Horumarinta Dhallinyarada JSL. Waxa uu noqon doonaa Sanduuq Dhallinyaro oo madax-bannaan oo si rasmi ah uga hawl-gala dalka, si loogu sahlo dhallinyarada leh hal-abuurka iyo curinta ganacsi ee u baahan taageero dhaqaale oo aan lahayn dul-saar. Waxa aannu ka codsanaynaa ganacsatada JSL in ay ka qayb-galaan dhaqaalaha Sanduuqa Dhallinyarada, isla markaana Xukuumad ahaan waxaanu ku shubi doonaa dhaqaale joogto ah sannad kasta, haddana waxaanu ku shubnay $200,000 Doollar ee ugu horreeyey.
6. Amniga iyo Difaaca Qaranka
§ Waxa kor loo qaaday niyadda iyo mooralka Ciidamada kala duwan ee Qalabka-sida.
§ Waxa la kordhiyey tirada iyo tayada guud ahaan Ciidamada Qalabka-sida.
§ Waxa la soo afjaray dhammaan colaadihii iyo shaqaaqooyinkii ka taagnaa Gobolka Sanaag.
§ Waxa 68% hoos loo dhigay dambiyada ay dhallinyaradu ka gaystaan magaalooyinka, iyada oo la fulinayo Qorshaha Farsamo ee dhinaca adkaynta ammaanka ee heer Gobol iyo heer Degmo.
§ Waxa iskaashi amni lala sameeyey dalalka dariska ah, waxaana hoos loo dhigay dambiyada iskaga gudba xadadka.
§ Waxa la dhammaystiray, lana ansixiyey Xeerka Hawl-gabka iyo Xaq-siinta Ciidamada Qaranka. Xeerkaas oo sida magaciisa ka muuqata dhammaystiraya xuquuqda iyo xaqa Ciidamada Qalabka-sida.
§ Waxa la dhammaystiray Cisbitaalka Ciidanka Qaranka oo siin doona adeeg caafimaad oo hufan dhammaan Ciidamada Qaranka.
§ Iyada oo laga jawaabayo baahida Ciidamada Qaranka iyo Shaqaalaha Dawladdu u qabaan in ay helaan dhul ay dagaan, waxa Xukuumaddu go’aan ku soo saartay in dhulka Danta Guud ah qayb laxaad leh looga diyaariyo Ciidamada Qalabka-sida iyo Shaqaalaha Dawladda JSL.
7. Abaaraha iyo Isbeddelka Cimillada
§ Waxay dhistay Xarunta Kaydka Raashinka Qaranka, oo xarumo ku yeelan doona dhammaan Gobollada Dalka.
§ Waxa 600 oo qoys oo kala jooga Gobollada Awdal, Salal, Gabiley iyo Saaxil oo ay xoolo tirtay Duufaantii Saqar loo sameeyey dib u xoolayn, waxaana qoys kasta la siiyey 15 neef si ay dib ugu laabtaan noloshoodii caadiga ahayd.
§ Waxa agab iyo raashin la gaadhsiiyey 28,200 oo qoys oo ku barakacay abaaraha sannadihii hore.
§ Waxa shaqo loo abuuray ama lacag caddaan ah la siiyey 11,000 oo qoys oo kala jooga Gobollada Dalka.
§ Waxa Xukuumaddu dalka dib ugu soo celisay dhallinyaro tiradoodu gaadhayso 460 dhallinyaro ah oo hore dalka uga tahriibay, waxaana loo sameeyey barnaamij dib u dajin ah.
9. Siyaasadda Arrimaha Dibedda
1. Hor-joogsiga mashaariicdii horumarinta; oo ay ugu weynayd dagaalkii ay ka gashay dhismaha Dekedda Berbera.
2. Hor-joogsigii Sanduuqii mashaariicda horumarinta ee u gaarka ahaa Somaliland (Somaliland Special Arrangement).
3. In keligeed Dawladda Soomaaliya qaadatay Deeqaha Waxbarasho, Dhaqaale iyo Ciidan ee caalamku ku bixiyeen magacii Dawladdii Soomaaliyeed ee burburtay.
4. Fulin la’aanta Heshiiskii Habka Maamulka Hawada Sare ee ay saxeexeen Madaxweyne Silanyo iyo Madaxweyne Xasan Sheekh.
5. Isku daygii hor-joogsiga adhigii Xajka ee ka dhoofayey Dekedda Berbera.
6. La-dagaalanka dawlad kasta oo milgo iyo maamuus u muujisa Jamhuuriyadda Somaliland, sida tii ka dhacday Gini Konnaakari.
1. In Soomaaliya xurmayso xaqa ay Jamhuuriyadda Somaliland u leedahay go’aankii 18 May 1991-kii ay kaga noqotay Midowgii aan sharciga ku dhisnay.
2. In Soomaaliya si buuxda u garwaaqsato in aqoonsiga Qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland yahay xalka qudha ee lagu heli karo wanaag iyo wax-wada-qabsi dhexmara labada dal.
Sharci fududeynaya qaadashada caruurta oo baarlamaanka horyaala.
Laba sharci oo cusub oo maanta kadhaqangalay wadanka Denmark
Barnaamijkii maxaa kucusub Denmark oo aad kumaqlidoontaan wararkii ugu waaweynaa todobaadka
Fajr 05:28 05:36 05:37 05:26
Shuruq 07:09 07:17 07:18 07:07
Asr 14:59 15:07 15:08 14:57
Maghrib 17:38 17:46 17:47 17:36
Isha 19:12 19:20 19:21 19:10
Daughter of former PM says she was prevented from leaving country…
Golaha Guurtida Somaliland Oo Ansixiyey Ajandaha Kal-Fadhigooda 74-…